President Bill Clinton Sings John Lennon’s Imagine စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ | Dr Ko Ko Gyi's Blog
« ဆရာကြီး ဦးရာဇတ် ဂုဏ်ပြု ဇာတ်လမ်း
Al Jazeera’s Interview with Maung Maung »
ငြိမ်းချမ်းရေး သီချင်းတွေထဲမှာ Imagine သီချင်းက တခြား သီချင်းတွေနဲ့ ကွာတယ်။ ဘာကြောင့်လဲ?
တချို့သီချင်းတွေရဲ့ စာသားတွေလို “စစ်တွေရပ်ကြ” တို့ “စစ်ပွဲတွေဟာ မကောင်းဘူး” တို့က အပေါ်ယံ ဆန်တယ်။ ပြောရလွယ်တယ်။ စစ်ပွဲတွေ မကောင်းတာက လူတိုင်းသိတယ်။ သိသိနဲ့ တိုက်နေကြတဲ့ဟာ။ Imagine သီချင်းကတော့ (စိတ်ကူးယဉ်ဆန်ပေမဲ့၊ လက်တွေ့ မဖြစ်နိုင်သေးပေမဲ့) ပဋိပက္ခတွေ ဖြစ်နေရခြင်းရဲ့ ရင်းမြစ်ကို ရေးထားတာ။ နိုင်ငံတွေ မရှိ၊ ဘာသာတွေ မရှိ၊ လောဘတွေ မရှိမှ တကယ်ငြိမ်းချမ်းမှာ။ လက်တွေ့မှာတာ့ မဖြစ်နိုင်ဘူးပေါ့လေ။ ဒါပေမဲ့ ဖြစ်နိုင်တာတွေ၊ မဖြစ်နိုင်တာတွေ ဘေးချိတ်။ ကိုယ့်စိတ်ကူးထဲမှာတော့ ဒီစံနှုန်းဟာ တော်တော်ကောင်းတယ်လို့ သိနေရတာကိုပဲ တော်တော်လှနေပြီ။ အလှတရားတစ်ခုအပေါ် စိတ်ကူးယဉ်ခံစားမှုကို လက်တွေ့ဖြစ်နိုင်တာတွေ၊ မဖြစ်နိုင်တာတွေနဲ့ ကန့်သတ်ထားစရာမှ မလိုတာ။
John Lennon ဟာ သူ့ဇနီး ဖြစ်တဲ့ ဂျပန်စာရေးဆရာမ Yoko Ono ရဲ့ Grapefruit ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ကဗျာတွေကနေ… Imagine သီချင်းကို ဖန်တီးဖို့ စိတ်ကူးရခဲ့တာလို့ ဆိုကြတယ်။ အောက်ကဟာကတော့တာ့ Imagine သီချင်းကို ဆရာလူထု စိန်ဝင်း ဘာသာပြန်ထားတဲ့ဟာပါ။ ရှက်စိတ် ဆိုတဲ့စာအုပ်ထဲက။
(စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…ကောင်းကင်ဘုံဆိုတာ မရှိလို့။ ကြိုးစားကြည့်ရင် လွယ်ပါတယ်။ ငရဲ ဆိုတာလည်း တို့အောက်မှာ မရှိ။ တို့အထက်မှာလည်း မိုးကောင်းကင်ကြီးသာရှိ။ စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…လူသားအားလုံး ဒီနေ့ (ပစ္စုပ္ပန်) အတွက် နေနေကြတယ်လို့)
(စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…တိုင်းပြည်နိုင်ငံတွေ ဆိုတာ မရှိလို့။ ဒါလည်းလုပ်ဖို့ရာ မခက်ပါဘူး။ တိုင်းပြည်အတွက် ဆိုပြီး သတ်ကြရတာ၊ သေကြရတာတွေလည်းမရှိ။ ဘာသာတရားဆိုတာတွေလည်း အလားတူ မရှိပေါ့။ စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…လူသားအားလုံး ငြိမ်းချမ်းတဲ့ဘဝမှာ နေနေကြရတယ်လို့)
(မင်းတို့က ငါ့ကို စိတ်ကူးယဉ်သမား တယောက်လို့ ပြောကြလိမ့်မယ်။ ဒါပေမဲ့ ငါဟာ တယောက်တည်း မဟုတ်ပါဘူး။ တနေ့မှာ မင်းတို့လည်း ငါနဲ့အတူ လက်တွဲလာလိမ့်မယ်လို့ ငါမျှော်လင့်တယ်။ အဲဒီနေ့ကျတော့ ကမ္ဘာကြီးဟာလည်း တခုတည်းပေါ့)
(စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…ပိုင်ဆိုင်မှု ဆိုတာတွေလည်း မရှိလို့။ မင်းလုပ်နိုင်ပါ့မလားလို့ ငါတွေးဆနေမိတယ်။ လောဘဆိုတာလည်း ရှိဖို့ မလိုတော့ ဆာလောင်မွတ်သိပ်ခြင်း ဆိုတာတွေလည်း ရှိဖို့ မလိုတော့ဘူးပေါ့။ လူသားအားလုံး ညီနောင်ရင်းချာများသဖွယ်။ စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…လူသားအားလုံး ကမ္ဘာကြီးကို ဝေမျှခံစား နေကြတယ်လို့)
မှတ်ချက်။ ။ ဆရာလူထုစိန်ဝင်းရဲ့ ရှက်စိတ် ဆိုတဲ့ စာအုပ်ထဲက ဖြစ်ပါတယ်။ ပထမအပိုဒ် နောက်ဆုံးအကြောင်းက ebook ထဲမှာ မပါလို့ ကျနော် ဖြည့်ပြန်ထားတာပါ။ “Imagine all the people living for today” ဆိုတဲ့ စာကြောင်းပါ။ “စိတ်ကူးကြည့်စမ်းပါ…လူသားအားလုံး ဒီနေ့ (ပစ္စုပ္ပန်) အတွက် နေနေကြတယ်လို့” လို့ ကျွန်တော် ထပ်ဖြည့်ထားလိုက်တယ်။
ဒါကတော့ အမေရိကန် သမ္မတဟောင်း Bill Clinton နဲ့ အစ္စရေးအဆိုတော်၊ အာရပ်ကလေးငယ်တွေနဲ့ အစ္စရေး ကလေးငယ်တွေ အတူတူ ဆိုထားတဲ့ဟာပါ။ John Lennon ရဲ့ လင့်ခ်မပေးဘဲ ဒီလင့်ခ်ပေးရတာက… အဲဒီ အစ္စရေး အဆိုတော်မလေးက ချစ်စရာကောင်းလို့ 😀
This entry was posted on November 9, 2017 at 10:58 am and is filed under Uncategorized.	You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. You can leavearesponse, or trackback from your own site.